सरकार र सिके राउत बिच को सम्झौतामा बारे प्रचण्ड यस्तो भन्छन् | ( भिडीयो सहीत )
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तराईमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाईरहेका सिके राउतसंग हालै मात्र सरकारले गरेको सहमतिका सम्बन्धमा अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
पोखरा विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले राउतसंगको ११ बुँदे सहमति राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षाका खातिर गरिएको दावी समेत गरेका छन् । पुर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले राउतसंगको समहतिमा उल्लेख गरिएको जनअभिमत भन्ने शब्दको अपब्याख्या गर्दै अर्नगल प्रचार नगर्न सुझाए ।
सरकारले पछिल्लो बिज्ञप्ति निकालेको छैन् । सिकेले कुनैपनि धारणा जनकपूर गए पछाडी दिनुभएको छैन् । सहमति पत्र काग़ज़मा मात्र सिमित हुन पुग्यो । सरकार का दुई प्रभावकारी नेता भिम रावल र नारायकाजी श्रेष्ठ ले विरोध गरिसके । सरकार र नेकपाका अन्य विश्वास गरेका नेताहरु सहमति र सरकारको बचाउ तिर लागि परेका छन् । अब के हुन्छ ? सहमति तिन मानेनन् सिकेका पक्षधरहरुले । किन सहमति विपरित अपव्याख्या गरियो । ११ बुदे सहमतिमा गम्भिर त्रुटि यस्तो छ ।
१)नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधिन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अभिवाज्य राष्ट्र भएकाले अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो तर फ्री मधेष को झण्डा बोक्दै , मधेश नेपाल होईन् भनियो ।
२) असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं भनियो तर किन सिकेहरुले यसलाई जनमत संग्रह भनेर व्याख्या गरे ।
३)मतभेदहरुको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं भने तर नेपाल सरकारले सुरक्षा अंग प्रदान गर्दागर्दै पनि बुलेट प्रुफ ज्याकेटधारीहरु कहाबाट आए ।
४) सामाजिक न्याय, समानता र सदभाव हाम्रो साझा उद्धेश्य हो भनियो तर जनकपूरमा ‘फ्री मधेश ‘ भन्दै तिहार मनाउनु नेपाली जनताको भावनामा चोट पुग्यो । कसरी भयो सामाजिक न्याय ?
५) कार्यकर्ताहरुलगायतमाथि लगाइएका राज्य विरुद्धका अपराध फिर्ता लिने भनियो तर कार्यकर्ता ले राज्य विरुद्ध सहमतिपछी पनि लागिपरेका छन् ।
६) पर्चा, पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाईन सामग्री आदिलाई भविष्यमा वितरण गरिने छैन भनियो तर सहमति पछी पनि तराईमा वितरण गरिएको देखियो ।
७) संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न सिके तयार भए तर जनकपूरमा किन बिखण्डनका कुरा गरियो । किन बिभाजनका कुरा गरिए । चुपचाप अभिनन्दन स्वीकार्दै किन सिकेले सहमति उल्लंघन गरे ।
८) नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्तिका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ भनियो तर सहमतिको पालना नगरेर राज्यविरुद्ध सिकेका कार्यकर्ता लागेको भन्दै जनकपूर मा प्रहरी र सिकेका कार्यकर्ता बिच झड़प हुन पुगेको भए को ज़िम्मेवार हुन्थ्यो । के पून: सहमति हुन्थ्यो ? जवाफ चाहियो ।
९) आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारको जिम्मा सरकारले लिने भनियो तर राज्य विरुद्ध किन पून: आन्दोलन गरियो । किन स्वतन्त्र मधेश ज़िन्दाबाद भनेर भनियो ।
१०) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई एक लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा व्यवहार गर्न सहमत किन भए । यो ‘स्वतन्त्र मधेश’ शब्द नै देशद्रोही शब्द हो । के अब स्वतन्त्र पहाड , स्वतन्त्र हिमाल हुने हो ? यो सच्याईयोस् ।
११) यो सहमति २०७५ फागुन २५ गते शुक्रवारका दिनदेखी लागु हुने छ भनियो तर सिके र सिकेका कार्यकर्ता ले लागु गरेनन् अब के हुन्छ सरकार ? जवाफ चाहियो ।
एक हप्तामा सरकार ढाल्छौ ! देउवा प्रचण्ड नेपालको दिमाग खल्बलियो ! भर्खरै ओलीको यस्तो घोषणा:
पोखरा,फाल्गुन ४। पोखराको नदिपुरमा काटिएको अवस्थामा बच्चाको टाउको र हातको पञ्जा भेटियो भिडीयो सहीत
मलाई इतिहास र ति हजारौं सहिदहरुले अलग हुन दिँदैन बाबुरामजी : प्रचण्ड